नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : नेपाल हाम्रो घर हो, डेरा होईन (सबै नेपालीले हेर्नु पर्ने)
नेपाल हाम्रो घर हो, डेरा होईन (सबै नेपालीले हेर्नु पर्ने)
नेपाल हाम्रो घर हो, डेरा होईन
यदि त्यो घरको भित्ताहरु चर्कियो भने डेरा वाला लाई वास्ता हुँदैन, उ त सजिलै अर्को घरमा
तर घर मालिकलाई थाहा छ कि आफ्‌नो घरको हेरचाह आफै गर्नुपर्छ, अरु कोहि आउनेवाला छैन । त्यसैले उ आफैले त्यस घरको भित्ता टाल्दछ।
४ मध्य ३ नेपालीहरु तपाईँ-हामी जस्तै युवा हौँ।
समस्या यत्ति हो कि हामीले चाहिँ देशलाई डेरा ठानेका छौँ।
हामीले अघिल्लो पुस्तालाई यो देश बरबाद गर्न दिएका छौँ । उनीहरुको झगडामा हामीलाई कठपुतली बनाउन दिएका छौँ।
"तिमीहरुले यो देश कहाँ हाँक्न सक्छौ?"
कोहि हामी ईन्टरनेटमा सिमित छौँ त चिया गफमै।
यो सोच्दैछौँ कि कुनै दिन यो नेपाल भास्सिएर बिलाँउछ अनि बल्ल नया नेपालमा हामी जान पाँउनेछौँ।
अहिले हामी मतदाता कार्ड होईन, ग्रिन कार्ड खोज्छौँ। हामी आवेशमा छौँ , तर केहि गर्न भने डराँउछौँ।
यो देश बचाउने ठेक्का अर्को बुद्ध वा पशुपतिनाथको होईन । न त कुनै दाताकै।
सरकार र अहिलेका राजनितिक शक्तिहरुले त प्रस्ट देखाईसकेका छन् , कि यो काम उनीहरुको पनि होईन।
जिम्मेवारी भनेको आफैले निर्वाह गर्ने हो। नेपाली भनेर होइन बनेर देखाउने हो।
अब बिकल्प कुर्दै बस्ने होइन अाफै हुने हो।
किनकि यो देश ढले, हामी पनि यसैसाथ ढल्छौँ ।
अहिले नगरे कहिले ? हामीले नगरे कसले?